Mai Chibwe VekwaZimuto: Mibvunzo nemhindiro 5
Mibvunzo nemhindiro 5
Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 4 yava kuzara saka tava kutanga rino. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 4, 3, 2, 1. Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here?
1 Mai chibwe makadii happy new year inini ndoda kubvunzawo kuti ko munhu kadzi kana murume anokwanisa kugara kwenguva yakadii asina kumbovata nemurume kana mukadzi tomboti pamwe murume kana mukadzi anoshandira kusouth africa apo mukadzi ari kuzimbabwe Hakuna nguva ingahi ndiyo inokwanisa kugara munhu asina wekuvata naye. Chokutanga kuhwisisa ndechokuti pakuvatana vanhukadzi vakawanda vanohwa vane SECURITY nokuda kweka pedo nomurume uye kuhwa kudiwa nomurume. Kumunhukadzi kuvatana nomurume kune rudo mukati. Kuvarume zvoita sokuti kungoda kubvisa shungu dzomuviri.
Kotizve kana munhu akatanga kuvata noumwe munhu, muviri wake unojaira kunakigwa nazvo zvokuti kana uya umwe akafa kana kuti akamuramba kana kuti akaenda kune imwe nyika, panoita nguva yazvinonetsa kuvata ega zvokuti anofunganya pazviri.
Poitazve nguva yaunoshuva murume wako zvokuti unomboswedzera kushandisa maoko kuzvibvisa zemo. Varumewo ndizvozvo. Kunozoti fungwa dzabvuma kuti murume/mukadzi haapo woona kuti unozvirambidza kuita zemo, asi dzimwe nguva unosuva umwe wako chose. Pamwe unochemedzwa nazvo kusvika wabatwa nehope. Pamwe unowedzera kushanda kuti muviri unete.
Ngatihwisise kuti zemo rinobva mufungwa kwete pamberi. Mafungire ako ndiwo anokupa zemo.
Unokwanisa kuita upeny hwese usina kumbozovata noumwe munhu. Toti murume oenda kune imwe nyika, ondofirako kwapera makore maviri kana matatu. Iwe ukangogumbuka nazvo unokwanisa kusazoda umwe murume. Unokwanisazve kugara nguva refu wakamirira kuti adzoke kana muchiri kudanana.
Hachisi chinhu chakanaka kuparadzana nomurume/mukadzi wako. Vamwe vashoma vanomohura kuri kungoda kuvata noumwe munhu vakamirira.
2 Ndiri panguva yokuroorwa saka ndati ndibvunzwewo kuti Murume anokwanisa kupinda zvakadii mukati memukadzi. Hazvirwadzi here? Murume anokwanisa kupinda kusvika paakakurira iye murume. Hazvinei nemukadzi nokuti chitubu chomukadzi chinotatamuka kusvika chombo chese chomurume chapinda paadira. Kana murume ane chombo chikuru hazvina kana basa. Chinongokwana nokuti chitubu chinotatamuka pakuvhurika nepakudzika.
Kotizve kana munhukadzi akita zemo, anozvimbirira pamberi zvese nomukati mechitubu. Chibereko muromo wacho unohi CERVIX unorerekera kumusoro kuti kuno kunopinda nechombo kuwedzera nzvimbo zvokuti panowedzera 4 cm. Saka unoona kuti murume ane chombo chakapfuura 16cm chinokwana chete mukadzi achingonakigwa pasina kugwadziwa
Asi kana asina kunyorova zvinogwadza uye zvinogwadza kwenguva refu mapedza. Ndizvo uchiona kuti kubatwa chibharo kunogwadza.
Usatya. hapan chinombogwadza. unotopedzisira wavewe unoshusha murume kuti akupinze futi nguva nenguva nokuti zvinonaka kuita.
3 Chii chinoitisa mukadzi arwadziwe pakuvatana nomurume. Chikuru chinorwadza pakupinzwa chombo inyaya yokuti iye mukadzi haahwisis kuti anofanira kutanga anyorova muchitubu kuti panopinda chombo chigotsvedzerera pakukoirana. Murumewo haahwisisi kuti pakupinza mukadzi asina kunyorova anofanira kumbomira ari mukati asingakoiri kuti mukadzi awane nguva yokunyorova pasina kugwadziwa.
Kune varume vasingahwisis nyaya dzokuvatana idzi vanofunga kuti mukadzi akavhura makumbo anofanira kukauriswa. Vamwe unotohwa vachizvirova dundundu mukusahwisisa kwavo. Unohwa achitaura pamusoro pemusikana wake kuvamwe achiti
Ipapo anenge achitofunga kuti mukadzi ainakigwa nazvo izvo bodo. Hazvizikamwi kuti mukadzi ari pakaoma. Iyewo mukadzi wacho kuti ataurire murume zvomunetsa.
Vanhu hwisisai kuti kuisana mukadzi asina kunyorova zvinogwadza uye zvinokuvadza maMEMBERANE emukati anova ndiwo anobatsira kudzivirira zvigwere. Mukadzi ngaatange anyorova. Kana mhuka chaidzo dzinomirira kusvika hadzi yanyorova. Bhuru rinofembedza rohwa kuti pari kunhuwa kunyorova here, rozikwira mhou. Ko isu vanhu tinozvitadza papi?
4 Kuchecheudzwa zvino dzivirira chii Hapana chazvinodzivirira. Inongoriwo fashion inoitwa nevarume pavadira asi hakuna chatingati BENEFIT. Kana pane chazvinodzivirira hachisati chawanikwa chikanyogwa zvokuti vanhu vachihwisise.
Asi inyaya yokuti madhokotera anowana mari yakawanda pazviri nokuti vanopiwa mari ne ma NGO kuti vazviite. Vakawanda vema dhokotera acho havana kuchecheudzwa ivo pachavo kureva kuti havafungi kuti zvine basa.
Asi ukaterera varume vakachekwa vachiitirana nharo nevasina unohwa vachitogwinyirira kureva nema kuti zvinodzivirira chino nechino asi wozotarisa vasina kuchekwa woona kuti havana zvacho zvinohi zvinodzivirigwa. Zvigwere zvechihure zvinoitiswa nokuhura kwete kuti une ganda here kana kwete. Ukahura usina ganda unongobata zvigwere kufanana noune ganda.
Vamwe vanobvunza kuti seiko vanhu vechi ARABHU vasina HIV sevanhu vekwedu kuzasi kwe Ekweta? Nyaya ichibva pakuti vechi Arabhu vakachekwa vekwedu hava. Asi nyaya iripo ndeyokuti kwedu ukahura vanhu vanongokuseka kuma Arabhu unochekwa musoro saka chihure chishomanana kwavo ndosaka kusinawo HIV. Hazvinei neganda.
Murume anobatsirika pakuchecheudzwa ndeuya ane ganda rinoshinya chose kana chombo chamira zvokuti anogwadziwa pakuvatana nomukadzi. Ndivo varume vanochekwa.
5 Ndoita sei,murume ave kuhura nemlkadzi weminhu Chokutanga funga kuti iwe uri kuda kuvata nomurume wako here. Kana uchida chirongai yokushandisa majomho kuti usabata zvigwere. Hwisisa kuti mukadzi waari kuhura naye pamwe ari kutohura nevamwe varume uye murume wake ari kuhurawo nevamwe vakadzi saka zvigwere zvese zvinobva ipapo iwe uchazviwana kusvika mese makwana nazvo.
Kotizve kana uchida murume wako unofanira kuronga kuti woita sei. Kuumuudza kuti asahura hazvibatsiri chinhu nokuti anotoziva nechekare kuti hauzvifariri. Hapana chaunokwanisa kuita kuti asahura. Asi ingoudza hama dzake dzizive kuti ndoozviri kuitika. Uku kasira kuenda kuTEST undoitwa FULL HEALTH SCREEN uzive paumire.
Hazviiti kuti munhu ambohura azorega kuhura. Unokwanisa kuzviudza nhema kuti anokwanisa kurega asi chokwadi ndechokuti haacharegi kusvika achemera kana kuti afa nechigwere. Zvokuita zvishoma asi zviri kwauri kuti wodii.
6 Ndine dambudziko rokuti murume wangu anoda kuvatana kakawanda tivete asi ini ndinodawo chose asi ndinonetseka nenyaya yokutya kuzonhuwa zasi. handidi kumuka ndichinogeza usiku saka ndiri kurambira murume, Ndingaitawo sei?
Kuiswa ndinoda chose asi kumuka ndichinogeza handidi.
Nyaya yokuti pese pamapedza kuvatana umwe womuka ondogeza inyaya inoratidza kuti ane inohi OBSESSION nokugeza. Kuiswa handi kupiwa tsvina bodo. Urume haisi tsvina ingahi inodiwa kugezwa usati wapiwa humwe futi. Iwe murume chipatsanangura ipapo kuti haupi mukadzi wako tsvina asi unomupa urume hwerudo ahwisise kuti hapana chakaipa paurume.
Kotizve kugeza hakubvisi urume mukati memukadzi. Mukati make mune zvimakoronga zvakawanda zvinoti kana kuchiisana murume akabudisa urume hunoeredza huchienda muzvikoronga izvozvo zvokuti chero akasimuka akafamba famba haubudi. Hunogara huri upenyu imomo kwemazuva mana kubva pamakaisana.
Koita humwewo hunoti pamunopedza madziro echitubu chake anodzokurana pakuvhara buru range ravhugwa nechombo. Hunongovhinza kuchururuka pazhe. Iye anokwanisa kungopukuta netawero chete asi hunotovhinza kwekanguva saka kungoti apukuta oisa tawero opapo huti asanyorovesa mubhedha. Zvadaro murume akamira futi chombo anongopinza futi motoisana pasina zvokuti pese pama pedza munhu ondogeza.
Ikafunga kuti vanhu vakawandisa vanoisana kuviri kana katatu pazuva ndiani angagara ari mubhavhu nguva yese iyoyo? Kuisana hakuna hwema hwakaipa uye chitubu chomukadzi hachiitiswi hwema nokuiswa. Hwema hunoitika kana warega urume uya hwabuda kana kuti hwarasikira pazhe pechitubu. ukahurega huchioma paganda hune hwema hunozikamwa kuti ndegweurume asi hahuna kuipa.
Vamwe vanotozora urume paganda nokuti hune ma Proteins anotsetsekesa ganda zvakanaka chose toti kumeso. Urume hahuna tsvina uye hauitisi zvigwere.
Mukati mechitubu chomunhukadzi hamugezvi nemvura kana nechimwe chinhu. Ukahwa muchibuda hwema hwakaipa zvoreva kuti wabata utachiona saka kasira kundorapwa.
7 Ndinoona pamunopindura mibvunzo yavanhu muchiburitsa pfungwa dzekuti
murume kana achinge atanga chihure haafi akachirega. Nemhaka yei
muchifunga seizvozvo. Hakuna here varume vakazorega zvachose chihure.
Ndinonzwa kutya mashoko aya nekuti ini ndiri mukomana ndingatoti
ndakaita chipfambi nengari yekuti ndakarara nevasikana vakawanda. Asi
ndaroora ndakaramba ndiri pamudzimai wangu. Makore awanda takaroorana ini ndisingahuri.
Hongu ndingaona munhu asiri mudzimai wangu meso akamuchiva asi
handisati ndazosvika pakuda kurara naye. Zvinoreva here kuti rimwe
zuva ndichaerekana ndadaro futi.
Hazvinei kuti murume here kana kuti mukadzi. Kana munhu akaratidza kuda chihure, zvichamunetsa kuregera. Chihure haisi nyaya yokukara kuisana noumwe munhu. Kana iri yokukara munhu aingoshushana nomunhu wake mumba. Unyaya yokumhura munhu waugere naye mumba.
Chihure chiri paviri. Kune kuhura kwekuhi unodanana nevanhu vakawanda asi kwete nguva imwe chete. Unovata navo asi musina kuroorana. Ichi chihure hacho chinohi FORNICATION pachirungu.
Kozoita chihure chokuti unovata noumwe munhu asi iwe une murume/mukadzi mumba waunokwanisa kuvata naye sharaude. ndiyo ADULTERY. Chihure ichi ndicho chinoitika nokuti munhu nyakuhura anomhura munhu waakaroorana naye kusvika pakusamuona somunhu akakodzera kuva murume/mukadzi wake. hapana RESPECT pazviri. Ndizvo zvichinetsa kurega kuzohura nokuti kuhura kwake handi kuti anoda rhoji asi kuti anotaridza kumhura. RESPECT inodzidzwa uri mwana mudiki. Hazviiri kuti ozoidzidzira wakura saka hazviiti kuti umwe musi agozotanga kukudza kuadzi/murume wake.
STATISTICS inotaridza kuti kana akarambana nomukadzi/murume, anotowedzera kuhura kwacho kana aroorana noumwe munhu futi. Zvoreva kuti hapana chaadzidza pazviri.
Chance yedivorce pa muchato wekutanga iri pa 30%
Chance ye divorce pane wechipiri iri pa 66%
Nyaya inorambanisa vanhu kupfuura dzese ndeyekuhura.
8 Chii chinokonzera kuti murume wemumba arambe kurara nemukadzi wake? Kune zvikonzero zvakawanda zvinoitisa kuti munhu wese zvake, murume/mukadzi asada kuvata noumwe wake. Kuvarume chikonzero chikuru ndechokuti haachadi mukadzi wake asi haakwanisi kumuudza kuti haachamudi. Vanhurume kazhinji vanongotaura nyaya dzakadzika kana paita CRISIS. Kutadza kutaura zvaunoda mumba mako kunoitisa kuti mutadze kuhwisisana mumba kusvika pakuti munhu anotanga kutsvaka maitire ekuti ahwisiswe. Kunyararirana nokusavata ndizvo zvezvimwe zvinotanga kuitika.
Vanhu vakawanda vanofunga kuti murume kana asingadi kuvata nomukadzi wake zvinoreva kuti ari kuhura. Handizvo. Kazhinji murume akatanga kuhura anowedzera kuvata nomukadzi wake mumba kuti asambofungigwa kuhura.
Kana asisadi mukadzi
Kana ane dambudziko raasingadi kuti mukadzi azive, sokuti ane siki, kana kuti chombo hachisi kumira zvakakwana, kana kuti adzingwa basa, kana kuti asungwa, kana kuti akakwereta mari yaasingakwanisi kudzosera.
Varume vanonetsa kuhwisisa nokuti anotora nyaya dzisinei nokuvatana odziunza mukuvatana. Vanhukadzi vanozviita asi vanozviita kuti murume abvunze kuti chii chiri kuitika. Kana murume abvunza akaudzwa, nyaya yapera makumbo opatsana movatana henyu. Varume chero ukabvunza hapana chaunoudzwa. Kungofundumwara hapana chinotaugwa. Vanhu dzidzai kutaurirana mumba.
9 Kana mukadzi achiudza murume wake kuti haadi kuti mwana aende kumusha kwemurume wake zvinorevei? Kurera vana ibasa remukadzi pamhuri dzakawanda. Totizve mai vemwana munhu anofanira kuva munhu anoona kuti zvinodiwa pakukura kwemwana zvawanikwa zvikaitigwa mwana kuti akure zvakanana. Mwana wese anofanira kukura achiziva hama dzake dzekwamai nedzekwababa.
Zvinoitika kuti mai vemwana vanopokana navamwene kana kuti baba vomwana vanopokana na ambuya. Zvosvika pakusafambidzana. Iyi kazhinji haisi mhosva yemuroora kana kuti yemukwasha. Pakuroorana kana ukasahwisisa kuti mhuri yako inokwanisa kupokana nomunhu wauri kuroorana naye, ukarega hama dzako dzichiita sharaude pakutsoropodza umwe wako, usazoshamisika kana iye owona sokuti hama dzako havasi vanhu vakakodzera kuti vasangane nevana vake.
Koitazve kuti iwe muridzi unogaronyeya hama dzako nomukadzi/murume wako kusvika aona sokuti vanhu vakaipa zvokuti haadi kuti vasangane nevana.
Zviitiko zvese zvine zvokonzero. Kazhinji tichitarisa pamubvunzo murume ndiye ane dambudziko rokusapurotekita mukadzi kuhama dzake kana kuudza mukadzi kuipa kwehama dzake.
Kozoitazve vamwe varume vane shavi rokuda kuhi ndiye mukuru mumba zvokuti unohwa munhu achingohwahwata zvinhu zvisina musoro. Kana murume akadai achida kuti vana vandoona vabereki vake wega unongoona kuti zviri nani utozvionera kuti vana havaendi,
10 Mushonga wekurapa sick njovhera unowanikwa kupi? Zvinobva nokuti uri munhu akachenjera zvakadii. Kune vanhu fuza chaidzo zvokuti pamwe unopedzisira wega wangi zviri nani munhu akadai afe zvake asati auraya vanhu vakawanda. Mazuvano hazviiti kubata siki usingadi siki kuzhe kwekuti uri mukadzi/murume wemunhu anohura.
Vamwe vese ava kuvata nomunhu wausingazivi STATUS yake zvinoratidza zvega kuti unofarira njovhera. Kuzovata naye usina kondhhomu zvinotoreva kuti uri kutotsvaka njovhera yacho nomuyo wese. Zvadaro chirega kufunga zvokuirapisa nokuti wave kutambisa mishonga.
Kurapisa njovhera kunoitwa kuchipatara kana kwaPrivate chete. Asi kune vamwe vanoda kuti njovhera ikasire kubata muviri wese vanoenda kuvaporofita kusaziva kuti iyeye muporofita ari kukuudza kuti anoda kukurapa anotoriwo nenjovhera yacho.
11 Ndakamitiswa nemukomana wangu asi haachandidi. Ndoita sei? Chaari kukurambira ndechokuti wakamutadzira chose. Hazvifanigwi kuti musikana aite mimba musina kubvumirana kuti uite mimba. Pachivanhu pedu tinoshandisa mashoko okuti musikana amitiswa, zvihwikwa sokuti musikana ndiye VICTIM mukomana ndiro bhinya. Handizvo. Musikana ndiye anofanira kupiwa mhosva. Iye anoziva kuti akaiswa pasina kondhomu anoita mimba asi anotovhura ega makumbo ake mukomana opinza chombo iye otochemerera achinakigwa nazvo. Pedzezvo oti amitiswa oda kupa mukomana mhosva.
Mapiritsi ekudzivirira mimba ariko. Makondhomu ariko, Kana watadza zviviri izvi ukaiswa, unokwanisa kuenda kwa DOCTOR wondopiwa mapiritsi okuti usabata mimba. Une mazuva matatu okuzvita. Saka unotadza kuita vese zvitatu izvi sei?
Kuita mimba kazhinji hunge wateya mukomana asingakudi kuti akuroore. Hakuchina musikana anoita mmba asingaidi. Hazvichaitiki.
Saka iwe zvibvunze kuti chawaidira mukomana asingakudi chii? Wakadii kumirira kuti muroorane wozoita mimba. Unokwanisa hako kuiswa asi shandisai makondhomu uye iwe shandisa mapiritsi. Zvokuita kuenda kumukomana womuudza kukanganisa kwako wokumbira ruregerero womuudza kuti kana akwanisa kudzora moyo unomuda kuti muroorane. Kana aramba siyana naye nokuti chokwadi ndechokuti imhosva yako.
Ini nemurume wangu tave nemakore maviri taroorana uye tine mwana. Bonde raitwa kamwe chete pavhiki kunge ndatokumbira nguva zhinji anongoti ndakaneta, ndogwara, haashayi chikonzero. Izvozvi hakusitorina bonde racho zvachose. Ndikaedza kuda kumubata anotoridza mhere. Handiziviwo kuti ndoita sei. Ndaperegwa nazvo.
Zvinoshaisa murume hanya nebonde zvakawandisa zhokuti hatingazvipedzi pano.
Pamwe chombo chinomunetsa kumira
Pamwe ane chigwere chaasingadi kukupa
Pamwe ari kuhura
Pamwe anofunga kuti uri kuhura
Pamwe wakaita zvokutizira iye asingakudi
Pamwe hama dzake hadzikudi
Pamwe haabvumi kuti mwana newake
Pamwe anofunga kuti unechigwere
Pamwe anofarira kuvata nevarume
Pamwe anotya pamberi pemukadzi
Pamwe haafariri imwe nyaya pauri
Pamwe munhuwo zvake asinei nokuvatana
Chikuru kuti mutaurirane muhwisisane muedze kutsvaka mazano okugadzira nyaya yenyu. Kumurhipota kuhama dzake zvakaipa nokuti vanomuona somunhu asingahwisisi. Uye kana akakuroora asi ari ngochani zvinotowedzera kufunganya kwake. Zamai kuhwisisana mumba menyu muudzane chokwadi.
13 Kune mushonga wandingashandisa here kukudza mazamu? Ndine mazamu madiki ini ndoda makuru. Hakuna mushonga wekukudza mazamu, asi kune vanhu vanotengesa mishonga yenhema vanokuudza kuti inokudza mazamu. Kana uchida kutenga mishonga iyi tenga hako nokuti imari yako asi usafungira kuti mazamu ako achakura nazvo.
Dai kune mumnhu ane mushonga wekukudza mazamu kana kukudza chombo chomurume munhu iyeye aiita mari yakawandisa. Asi chokwadi ndechokuti hakuna mishonga yakadai.
Vaporofita veZimbabwe vangaporofita havo kuti musonga wakadai unowanikwa kupi asi inhema chaidzo dziri pachena.
14 Ndingaziva sei kuti mimba yabata mwedzi usina kupera? Unokwanisa kuziva kuti wava nemimba kwapera mazuva kana maviri chaiwo asi hazvikubatsiri chinhu nokuti mimba dzakawandisa dzinobva dzega dzaisina kusvika mwedzi nehafu. Ukaenda kuchipatara kana TEST CENTRE ukakumbira kuti vakuite TEST yemimba vanokuudza. Ukokwanisazve kungonotenga TEST wega woitira kumba. Dzinotengwa kuCHEMIST.
Asi pamwe kunotambisa mari nokuti mimba zhinji dzinobva dzega panguva iyi. Ku DENMARK vakawana kuti 12% yemimba dzinobva dzega.
15 Ko chombo chomurume chinomira kana ndabata papi chaipo? Hazvina basa kuti wabata papi kana kuti wabata sei. kungobata chombo wopurudzira chero papi zvapo woudza murume kuti chiri kukura mumaoko mako, woramba uchipurudzira, unotoona chichitokura kusvika chati gwii kuoma chimire zvinofadza kuona.
Varume vanokasira chose kumra chombo. Vakasiyana nesu tinotora nguva kunyorova. Hazvinetsi kumisa murume chombo.
16 Ndingaita sei kuti murume wangu apuse? Ko unodirei kuti murume wako apuse iye achitombori munhu akachenjera? Zviri nani ungonotsvaka umwe murume akapusa usiye uyu akachenjera. Sokuona kwangu murume wako akaroorana nomukadzi akapusa chose. Kuda kuchinja munhu maroorana zvinotaridza kuti hauna kuchenjera. Pakunyengana nomunhu ndipo paunosarudza kuda kana kusada munhu sezvaari, kwete kuti wamboda munhu sezvaari wozoda kumuchinja kumuita nhapwa yako. Varume nevakadzi vanofunga mafungire ako havasi vanhu vanofanira kunge vari pamuchato noumwe munhu.
Chokutanga zama kuwana chimwe chokuita kuti CONFIDENCE yako ikwirire. Zamazve kuva munhu anovaka mhuri yako kwete kuiputsa. Zama kuhwisisa kuti kutaurirana nomurume wako kuti ave munhu anohwisisana newe chinhu chinobatsira kupfuura zvokutsvaka kukanganisa fungwa dzomurume wako waunaye mumba.
17 Mai chibwe ndokutendai nekubatsira kwakadai.ndakabatsirikana chaizvo kubva ndichirimusikanaa now am married had my wedding recently.but mwana haasi kuuya.recently I went kumusha kuzim ndikachekwa sare raive panobuda netsvina ranga rati kurei APA ndanga ndisingazive kuti chandinacho ndochinohi sare.saka ndakachekwa last month hachisati chanyatsopora but I just noticed futi kuti chiripo chimwe maybe hachina kuchekwa chese or chimwe chirikumera handizive.ndakarwadziwa Mai chibwe during the time I was being cut ne this mukadzi wekumasowe and now to think of cutting this one futi I can't even imagine it.chekutanga chaicho ndakatomboti ndichaenda kwa doctor as I veukama vakandi discourager vachinditi ndosaka usiri kubata pamuviri.ndafara chaizvo when I saw this teaching of yours but at the same time am confused kuti ndodii nhai?
Chokutanga hwisisa kuti vese vachena, vatema, maChaina, maIndiya, vese vanoita sare. Hwisisazve kuti hainei nokuita mimba saka hazvibatsiri kutaura zve SARE nezvemimba pamwe chete nokuti hazvitomborina kana kuwirirana pazviri. Saka apa uri kuti munhu akakucheka ndiye anogona basa iri kupfuura vese vanocheka zvemamwe marudzi here? Mamwe marudzi anoenda kuzvipatara saka isu tisu tisingarapiki kuzvipatara nokuda kweiko?
Chechipiri kuchekwa sare kungozvigwadzisawo hako nokuti unofarira nhema. Kumahosipitari sare dzinongosungwa dzofa kana kuti dzinochekwa patomboiswa mushonga wekutindivadza, kana kuti panoshandisa LIQUID nitrogen kufuriza. Zvinohi zvinogwadza asi hazvingafanani nokuenda kumunhu asingatombozivi zvaari kuita anotanga akuudza nhema kuti anyebere kukubatsira. Ko vanhu Seiko muchingofunga kuti zvechibhoyi ndizvo zvinoshanda ? Ndiyani murapi wechibhoyi wamunoziva akakurumbira Mupasi rese kuhi ndiye nyanzvi yokurapa?
Varapi venyu ivava ndivo vanokuudzai nhema muchipedzisira maremadzwa nazvo. Kuchekwa kwakaita wakambotanga wahwisisawo here kuti reza yacho taitwa STERILE? Ko day wakabata BACTERIA inoti ronda risapora waizodii? Vanhu kwanai veduwee, kwete kungoterera nhema dzamunoudzwa muraini. Zvinoita mari shoma kuenda kwaDOCTOR woudzwa zvokuita.
18 Ichokwadi here kuti kuita sex takamira hazviitisi nhumbu.? Inhema chaidzo . asi mukaita makamira murume akapheka kondhomu zvinobva zvaita chokwadi.
19 Is it a prblm kubuda mafluids akawandisa during sex Aiwa ndizvo zvakatonaka. Kana wazova munhu mukuru toti kuma 45 zvichipfuura uchaona kuti une rombo rakanaka chose nokuti vamwe vanotadza kana kunyorova zvoreva kuti pakupinzwa chombo zvinogwadza.
20 Mai Chibwe, Ndibatsireiwo ndasati ndakanganisa kufunga. Ndakawana mukadzi wangu ane mari yakati wandei ndikabvunza kuti aiwanepi iye akati ange akwereta kubva kune imwe shamwari yangu anova munhu anoshanda basa rakanaka uye anotamira mari iri pamusoro. Zvinokwanisika here kuti ari kutaura chokwadi kana kuti pane zvakaitika pakati pavo.
Kuti titaure nyaya iyi ngatitange nokutaura kuti imi pauviri hwenyu hamusi vanhu vanohwisisa kuti makaroorana saka munoshandira pamwe chete. Mukadzi wako hazvaifanira kuti akwerete mari kubva kushamwari yako iwe usipo. Asi iwewo kutanga kufungira mukadzi wako kuti pane chiri kuitika zvinoreva kuti hauvimbi mukadzi wako kuti munhu anohwisisa kuti kana akaita dambudziko rinoda mari anofanira kuenda kushamwari dzenyu kunotsvaka rubatsiro.
Kana akakwereta achihwisisa kuti mari yacho inodzosegwa sei panenge pasina chakaipa. Asi kana akakwereta achizoda kuti iwe uidzorere asi akwereta iwe usipo, nyaya yaipa ipapo.
Zvokuti pane chiri kuitika pakati pavo izvo hatikwanisi kuzvitaura kubva panyaya yokuti mari yakweretwa. Iwe ukanokwereta mari kubva kumukadzi weshamwari yako iyoyo, zvingareva here kuti pane chiri kuitika pakati penyu chisinei nokukwereta mari? Mumba tinofungirana zvakawanda zvichibva nokuvimbika kwedu. Kana ini ndisina kuvimbika, hazviiti kuti ndivimbe murume wangu iyevo kana asina kuvimbika zvinomunetsa kuti andivimbe.
Tanga wazviongorora iwe kuti unoziva kuti uri munhu akavimbika here. Zvadaro wochizvibvunza kuti zvinoita here kuti ukwerete mari kubva kushamwarikadzi yako pasina chimwe chiri kuitika pakati penyu?
Kubvisa mweya wema spiritual husband kunoitwa sei?
Hazviiti kuti ubvise mweya wema Spirit Husband nokuti hakuna mweya wakadai. Ukaone une mweya wakadai, enda kuvarapi vakuongorore zviri kukudya moyo urapwe zvikubve. Ukasadaro uchapedza nguva yako uchienda kuvaporofita venhema, N’anga, nevamwe vakadaro vanokupedzera nguva vasina zvavanokuwedzera muupenyu hwako. Hakuna mweya inohi Spiritual husband. Kana une murume une murume, kana usina hauna. Hakuna murume wekufungira.
Kune vamwezve vanoti kune mushonga unohi mubobobo wekuti munhu anawo anokwanisa kungovata nomunhu wese waada kuvata naye. Hakuna zvakadaro. Kana munhu achingoda kuhura ngaangohura hake asi ngaasapomera vanhu kuti vane mushonga wekumuhurisa. Hakuna zvadaro. Inyaya dzepanomira bhasi chete vanhu vakamirira bhazi vowana zvokufambisa nguva. Hazviitiki muupenyu chaihwo hwevanhu.
Chii chinokonzera munhu ane jeko kusabata mimba?
Jeko harinei nokubata mimba asi kuti chikonzero che jeko chingava chimwe chete nechikonzero chokusabata mima. Unofanira kundotariswa kuti uri papi pamamirire emuviri wako nokuti pamwe ine chibereko chiri padivi zvokuti chiri kukukonzera jeko.
Zvokubata mimba zvinokonzera kuti usaita zvakawanda saka hatingatangi nokungoti jeko. Pamwe murume wako haasi kukupa urume hune mhodzi dzakakwana. Pamwe hamusi kuisana zvakanaka panguva yokukandira zai. Hatingazivi kusvika tatarisa chimwe nechimwe.
Kusvuuka panhengo kunoitiswa nei pakuvatana?
Kusvuuka chikonzero chikuru kuisa mukadzi asina kunyorova. Kune vanhu vakawanda vasingahwisisi mamirire emuviri wemunhukadzi vanotozama kudziviira kunyorova kwake kana kusamirira kuti mukadzi anyorove. Murume akakupinza chombo usina kunyorova, wega unohwa kuto zviri kugwadza, kana fungwa dzako dzangoti zviri kugwadza, dzobva pakuda kuiswa dzoenda pakuda kudzivirira kugwadziwa. Zvoreva kuti kunyorova kuchatowedzera kunonoka. Murumewo kana riri fuza akatohwa uchichemachema nokugwadziwa anobva afunga kuti ari kugona basa aowedzera kukoira mese mosvuuka.
Vamwewo vakadzi vasina njere vanoisa munyu muchitubu kuti vasanyorova. Izvi zvinokuvadza ma MEMBRANE ari mukati uye kukuvadza zvinodzivirira zvigwere uye kusvuuka mese murume nomukadzi. Uchaona kuti kana muchiri vadiki vane makore ari pasi pe 30, munomboita imwe nguva yamunokweshana zvisina mwero mukadzi otsvika ropa mukati zvinogwadza. Kana mada zvokuswererana potai muchiisa mate pachombo kana pamukova wechitubu kuti panyorove.
Ndingadzidzisa sei mukadzi wangu kumwa chombo uye kuchibata zvakanaka.
Tanga nokuti ahwisise kuti kumwiwa chombo kunokunakira zvakadii. Kuti ahwisise imbomusvetawo bhinzi yake ahwe kunaka kwazvinoita. Kana ahwisisa hazvizonyanyi kumunetsa kana womutsanangurirawo zvokuita pachombo.
Paunotanga kumusveta bhinzi hwisisa kuti haidi puresha yakawanda. Inoda kurezviwa norurimi kusvika yajaira. Iwe chiterera zvaanokuudza. Kana achikubatirira musoro achiwedzera kukuvhurira uye kusimudzira bhinzi chiwedzera puresha anakigwe.
Kune varume vanotya bhinzi dzevakadzi vavo. Hwisisa kuti bhinzi haina MAGIC pairi yakangofanana nechombo chomurume asi kungoti iyo idiki.
Iyewo ngaahwisise kuti pakutanga kusveta chomo ngaasachisanganisa nemazino asi kuchikwiza musoro wacho norurimi. Zvinogwadzisa rurimi saka usakoira mukadzi mumuromo uye usamudiridzira urume mumuromo. Kana ada urume, rega iye asvete chombo kusvika urume hwabuda iye iota zvaanoda nahwo.
25 Ndinonzwa zemo kana murume asipo kana aapo ropera. Chingava chii? Inyaya inonetsa iyi asi kunetsa kwayo kushoma hako. Munhukadzi anokwanisa kuiswa asina zemo rakawanda. Zvinokwanisika kuti murume akaita zemo iwe usina unotanga kutamba naye kusvika wava nezemo iwe. Kana rikanonoka zvokuti haunyorovi, unokwanisa kusvandisa mate kuisa pamukova wechitubu. murume opinza asi osaita zveganyabvu. Iwe unoRELAXA muvuri kuti akwanise kupinza. Zvadaro chimbokusanai makapindana kudaro kuti chitubu chijaire kuva nechombo mukati uye kutanga kunyorova. Chikweshanai henyu kusvika maguta.
Taura nomurume wako panyaya iyi kuti azive kuti kuiswa unoda asi pane chinoitika kana ava pamba. Zvadaro muudze kuti mugaroisana asi atore nguva pakuongorora kuti wanyorova.
26 Ndodawo chose kumboiswa ndakafongora asi murume wangu haamondifongoresi. Iniwo ndotya kungomufongorera asina kunditi ndifongore. Ndodii? Taura nomurume kuti ajaire kukumutsa kana uvete kuti muisane usina kunatsomuka. Zvadaro kana achifunga kuti uchiri kuhope, iwe chivata nedumbu iye okukwira opinza nokumashure. Akangodaro kamwe chete iwe chimuudza kuti zvainaka zvisingaiti. uchahwa uda kugaroisana makafuratiran kudaro. Iwe chigarowedzera kusimudzira chiuno kusvika umwe musi unongofongora zvizere.
Pamwe izvozvi iye ari kutodembawo kuti sei mukadzi wangu asingamomufongoreriwo, iye achitotyawo kukuudza kuti fongora. Ko vamwe munongoisana musingataudzani seiko. Chiiko chinokunetsa uwe watomboita chivindhi chokumubvisira bhurugwa, pamwe atombokwenyerera bhinzi. Chasara ipapo chinotyisa chii pakungofongora murume opinza. Hwisisa kuti kana chombo chomurume chamira hapana chimwe chaachafunga kuzhe kwekuda kupinza chete. Kana pane chaunoda nomurume muudze chombo chimire.
27 Chii chinoita kuti munhu azvare mapatya Kana kumhuri kwenyu kwakamboita mapatya kazhinji tinodarika GENERATION imwe pasina mapatya ozoonekwazve kuumwe wevazukuru. Zviri muropa. asi chikonzero chacho chiri patatu
1 Vana vaviri vanoitika muzai rimwe chete venge vakafanana
2 Vana vaviri venge vakasiyana
3 mazai maviri anokandigwa pamwe chete poita vana vaviri vakasiyana.
Zvese zvinoitika nokuda kwemukadzi kwete murume.
28 Murume/mukadzi anotsamwa nguva yakareba what is his real character? Munhu wega zvake anoti akagumbuka woita nguva refu akafundumwara zvinokonzegwa nokusava ne SKILL ye COMMUNICATION. zvoreva kuti munhu asina confidence pakutaura saka anongofungira kuti vaya vanotaura vanotaura nezvake. Hazviiti kuti akuhwisise kana kuti iwe umuhwisise nokuti nyaya hamutaudzani ichisvika painoperera zvokugona kuhwisisana. Vanhu vakadai kazhinji vane hasha futi zvokuti anotofunga kuti kurova ndiko kumwe chete nokutaura.
Kana ukakasira kuhwisisa kuti wadanana nomunhu akadai, kasirazve kumusiya akadari uzvisunungure upenyu hwako nokuti ukatoorana naye une nhamo huru mumba. Hazviiti kuti arairike nevakuru saka hapana chaunokwanisa kuita.
29 Zvakanaka here kubuda zvinenge masperm kana vapedza kuita weti? Hazvina kunaka zvachose. Kasira kundorapwa. Zvinoreva kuti wakavata nomukadzi ane siki ukakangamwa kushandisa makondhomu ukabata siki yacho. Whisisa kuti makondhomu akaitigwa kuti vanhu vanoita zvoupombwe vasabata siki. Iwe wakatobata siki. Chienda undorapwa. Kana ukasakasira kurapwa hwisisa kuti pane siki dzimwe dzinoitisa murume ngomwa.
30 Ini ndichangopinda mumba mai chibwe,asi mudzimai wangu ane hwema kuzasi kwake,zviri normal here izvi, uye anonakirwa nebonde chaiko anobudisa zvima fluids zvichena kuzasi, ndibatsireiwo Ndizvo chazvo. Munhu wese murume kana mukadzi ane hwema pamberi hwakasiyana nehwevamwe. Hapana chakaipa ipapo uye iyewo anotofunga kuti iwewo une hwema pamberi. Hwema hunowedzera chose kana une zemo uye kana mapedza kuisana. Hapana chakaipa ipapo.
Munhukadzi wese anobuda mvura inobva pakunyorova kana ava nezemo. Chinototyisa hunge asinganyorovi. Vamwewo vanobuda furo jena vamwe vanobuda zvichina zvisiri furo vamwe mvura. Asi zvese zvinonyorovesa chombo nokuti ndinco chinopinda mukati chondogofamo makanyorova. Ndiko kutoisana kwacho ikoko.. Hapana chinotyisa. Zviri nani kunyorova pane kusanyorova. Usatyiswa nazvo. Kana muchangoroorana wanai mukana wekujaidzana kuisana kakawanda kuti miviri yenyu ijaire izvozvo. Kana mazogara nguva muri mese hazvikunetsii kugaroisana, pazvinhu zviviri zvinoti kumira kwechombo uye kunyorova kwemukadzi.
30 Unogona kubata nhumbu mushure memazuva 5 vabva kumwedzi here Zvinokwanisika asi nhumbu inowanza kubata kubva pa mazuva 9 kusvika mazuva 18 Chinonetsa ndechokuti urume hunogara huri upenyu kwemazuva mana mukati memukadzi. Saka unokwanisa kupiwa urume asi wozobata mimba kwapera mazuva iri ngari yokuti zai ravapo.
Asi pamazuva mashanu hazvinganatsi kuita.
Ndibatsireiwo.Ndava nemkore 14 ndaroorwa. Murume ane makore 58 ini makore 33. Murume wangu ndinomuda chose asi zvokundikwira haadi. Ndinokwanisa kuita mwedzi kana miviri pasina chaitwa. Pazvimwe zvese anogona hake asi ipapa pakundikwira haapakwanisi. Patakaroorana taiti zuva nezuva. Ndinoshaya zvokuita kuti ade kundikwira. Ndibatsireiwo.
Last week Ndichibva kuBulawayo ndakasangana nemurume wandakapinda naye chikoro ndokuita nyaya kusvika damuudza kuti murume wangu ava munhu mukuru saka zvinopota zvichinetsa. Iyewo akati kumba kwake mukadzi wake anomunetsa pakusada kuvata naye. Nezuro ndakaenda kuchisango chiri kudhuze nokumaplots kune plot yake ndikarara naye kaviri patwo hours tichishandisa Condoms. Not Proud hangu asi ndakadakarwa zvokuti.
Today ALL day ndaswera ndichingonetseka pazviri. Uku ndoda kukwirwa, uku chihure handidi. Vamwe munozvifambisawo sei kana murume asingadi kukukwira.?
Nyaya dzenyu dzakawanda dzinoda kugadziriswa asi kudzigadzirisa kwachi hakuitiki kana iwe watanga kuhura. Chihure hachina zvachinorapa. Chinotowedzera nhamo dzako. Sokuti ukabata mimba kana kuti chigwere. Zvokuti makashandisa makondhomu izvo ndizvo hazvo asi mukagarohura mese uchaona kuti hapaperi nguva musina kusvika pokungohurana musina makondhomu acho. Ndizvo zvinoita vakawanda saka usandiudza kuti imi makachenjera kupfuura vamwe.
Pawakawanikwa nomurume abva zera wainatsa kutozviona kuti haasi wezera rako. Vakadzi vechidiki vakawandisa vanongopedzisira vahura nokuda kwekushaya rhoji yakakwana mumba. Saka waifanira kugara wafunga kuti zvichafamba sei pamunozopedza makore mese.
Zvawati unomuda chironga nyaya yenyu kuti uwane mukana wekugutsana mumba kwete chihure. Pane zvaunokwanisa kuita. Tanga nokutsanangurira murume wako kuti pazera raari haasati asvika pokutadza kuvata newe. Kune varume vakawandisa vava vakuru paari vachiri kunatsovata nevakadzi vavo zvakawanda. Wataura wega kuti wanga waita nguva usina zvinhu. Saka kana akakuti kamwe chete kana kaviri pavhiki unokwanisa kumbohwa pane moyo.
Chechipiri wana mukana wekufidha murume zvokudya zvine balance. Kana usingahwisisi kuti balance yakamira sei ndinyorere titaure.
Chimwe chinoitisa murume asawanzoda kuvata nomukadzi kutya kutsoropodzwa kana chombo charamba kumira. Saka iwewo maitire ako pamurume wako anokwanisa kuitisa kuti murume asada kuvata newe. Varume vanhu vari SENSITIVE panyaya idzi zvokuti akangofungira kuti haakugutsi anotanga kusada kuzama kukugutsa nyaya dzenyu dzotokanganisika.
Musi waanoziva kuti wakahura kana kuti unohura uchaona kuti anotsvaka kukuramba. Zvisinei kuti une zvigumbu zvakawanda sei paari. Uchaonazve kuti hama dzake hadzikuregereri chero iye akada kukuregerera. Zvinokwanisika kuti murume waakavata naye uyu chikomba icho ari kutofamba achiudza shamwari dzake kuti uri hure rake.
Usafunga kuti Chikomba chine rudo newe. Kungodawo kuvhurugwa makumbo sezvaunodawo kumuvhurira. Anotozvirova dundundu kuti akavata nemukadzi wemunu kureva kuti anomhura murume wako uye anokuona somunhu asina unhu. Murume wako akashaika iyewo mukadzi wake akashaika usafunga kuti anouya kwauri achida munhu wekuroora. Anongovinga chihure ichocho chamatanga kuita.
Zviri nani kugadzirisa nyaya dzenyu pane kuhura. Unokwanisazve kuenda nomurume kuvarapi kundoudzwa kuti pane riwe dambudziko here riri kunetsa kuti asafarira kuvata newe.
32 Chii chinoitika musikana akageza nhengo yake nemvura inopisa? Anohwa kupisa kwemvura. Kana ichipisisa anozvuuka. Hazvina kusiyana nomukomana achigezawo nhengo yake nemvura inopisa. Wange uchifunga kuti chii chingaitikapo? Pane zviri kukunetsa pamoyo here nokugezwa kwenhengo?
33 Ndibatsireiwo. Kuzasi kwangu kudiki zvokuti murume haangakwanisi kupindako? Pane zvandingaita here kuti ndikure? Une makore manganiko? Hakuna munhukadzi angahi haakwanisi kugamuchira chombo chomurume nokuti kuzasi kwake kudiki. Chitubu chomukadzi chinotatamuka zvokuti chero murume akava nechombo chikuru zvakadii anokwanisa kupinza uye zvisingagwadzi kana amborega kuzasi kuchinatsa kunyorova.
Murume anohi ange ane chombo chakakura kupffura vese panyika anohi FALCON anozvitaurira ega kuti akavata nevakadzi vakawanda uye anombopota achivata nevarume futi. Kumashure kemurume kudiki chose pachitubu chomukadzi saka kana achikwanisa kupinza mumurume zvechingochani zvoreva kuti iwe uchawana murume agokupinza ugonakigwa pasina zvokuti kuzasi kudiki. Mirira chete kusvika wawana murume akakodzera.
34 Kuvaviwa nekuzvimba makumbo kwemukadzi zvinorevei? Ndingaita sei nazvo?
Zvinokwanisa kuitiswa nechimwe chezvakawanda zvinoti
1 Kusanatsofamba kweropa richienda kumakumbo
2 Ganda risina kunatsonyorova sokuti hauzori mafuta kwawo
3 Pane zvausingawirirani nazvo (ALERGY)
4 Une Diabetes
Kasirisa kumhanya kwamurapi undotesitwa kuona kuti chikonzero chaicho chii ukasire kupiwa mushonga uye kuterera kuti zvokudya zvaunofanira kuwedzera kana kuregera ndezvipi.
35 Chii chinokonzera kujambira umwe mwedzi pakuenda kumwedzi? Munhukadzi wese ane zvikandiro zvemazai zviviri chimwe kurudzi chimwe kuruboshwe. Chikandiro chimwe chete chinokandira zai kamwe chete pamwedzi miviri kureva kuti zvinochinjana kuti mwedzi uno robva kurudyi, mwedzi unouya robva kuruboshwe.
Kumwedzi kunoitiswa nokuti wakandira zai rikashaya urume hwekuriita kuti ritange kugadzira mwana. Kana ukaona uchienda kumwedzi kamwe chete pamwedzi miviri asi zvichingoitika zvakadaro zvinoreva kuti chimwe chikandiro chako hachisi kukandira zai. Kasira kundotariswa kuona kuti chii chasinganatsi kuita.
Kana uchimboita nguva uchienda kumwedzi zvakanaka wongozodarikira umwe mwedzi, zvinobva nokuti chii chaitika pamwedzi iwoyo.
1 Kufunganya STRESS kunokonzera kudarikira
2 Kusava noutano hwakakwana zvikuru kana wakakoresa kana kuondesa.
3 Kana une murume anogarokupa urume, zvoreva kuti unokwansa kuita inohi SPONTANIOUS ABORTION mwedzi iwoyo.
4 Kana uri pamapiritsi ekudzivirira mimba kana DEPO.
5 Kana wakamboita chigwere
Nezvimwewo saka kasira kundoonekwa zvikuru kana uchiri munhu wechidiki ane makore ari pasi pe 30.
36 Maitiro anoratidza mukadzi ane zemo Kana mukadzi ane zemo anonyorova kana kueredza kuzasi. Minyatso inokura uye inowedzera kumira. Bhinzi yake inomira kuti twii. uye inokura. Matinji anozvimbirira uye anoti nyevenyeve kuhwa kuda kukwiziwa. Kana ari mukadzi wako anokuudza kuti ava nezemo uye iwewo unokwanisa kumubatabata nokumusveta minyatso uye kupurudzira matinji nebhinzi nokupinza chigumwe muchitubu kuhwa kuti manyorova zvakadii.
Kana asiri mukadzi wako haunei nokuziva kuti ane zemo kusvika iye akuudza.
37 Kubata pamuviri uchiri kuyamwisa zvingakonzera chii? Zvinokonzera kuti uzvare umwe mwana kwapera mwedzi mupfumbamwe. Hapana chimwe chazvinokonzera. Kare vanhu verudzi gwedu vaiti zvinokanganisa mwana wauri kumwisa zamu asi idzi inhema hapana kana chinomboitika. Unokwanisa kubata mimba kwapera vhiki mbiri wazvara mwana asi kungoti mazuvano varapi vanokuudza kuti usavata nomurume kusvika kwapera mwedzi nehafu inova ndiyo nguva yokuti nyama dzomuviri dzidzokere padzange dziri kare. Asi unokwanisa kuti mukatanga kuvatana unobata mimba ipapo. Kana ukaona kuti rusvava gungakanganisika nokushaya mukaka, unokwanisa kumwisa mwana kusvika wazvara umwe. Hapana chakaipapo. Unongozonetseka pakurumura kwacho mwana mukuru oramba kurumugwa. Hapana rimwe dambudziko riripo. Kune vakawanda vanotozviita kana aita mimba nokukasirisa achiri kuda kumwisa mwana.
38 Kana uchida mukomana akuroore iye asingadi unoita sei? Unogara naye pasi womutsanangurira zvawange uchitarisira kuti pauviri hwenyu zvingaitika ndezvipi. Womupa mukana wekukutsanangurirawo zvaaenga achitarisira kuti zvingaitika. Kana mahwisisana ukanatsobata musoro wekuti iye haadi kukuroora, zvinoreva kuti haafungi kuti uri munhu akakodzera kuroorana naye. Zama kuti akutsanangurire kuti chikonzero ndechei kuti kana zvichigadzirika ugadzire.
Anokwanisa kukuudza kuti nguva haina kukwana, sokuti anoda kuti utange wapedza chikoro kana kuti iye apedze chikoro, awane basa, awane mari yeroora, atenge imba, nezvimwe zvakadaro. Kana musingashandi hazvifaniri kuti mufunge zvokuroorana kusvika mava kushanda.
Kana wange uchibika mapoto naye hwisisa kuti ndicho chikonzero chikuru. Murume haawanzi kuda kuroora mukadzi atove mukadzi wake nechekare.
Kana wahwisisa kuti inyaya yokuti haana chikonzero asi kusangokudawo hake, chionekanai uende utange kutsvaka uwe mukomana.
Kumirira munhu asingakudi kushaya njere.
39 Chii chinoita ndirwadziwe kana ndichivata nomurume? Ndinorwadziwa kana murume ari mukati zvokuti dzimwe nguva ndotya. Chikuru ndechokusamirira kuti unatse kunyorova murume asati apinza chombo mukati mako. Kupinzwa chombo kunofanira kukunakira kwete kukugwadza. Itai nguva muchirezvana iwe uchifunga kuti uchatopedzisira wapinzwa chombo uchitarisirawo kuti zvidaro. Kana wanyorova zvakanaka uchihwa kuti shuwa wanyorova uye bhinzi yamira, matinji azvimbirirawo uchiti ukabata zasi unohwa kuchitsvedza nokunyorova, chivhura makumbo murume apinze chombo. Apinza imbomirai kukoirana kusvika iwe wahwa kuti chombo chigere zvakanaka mukati. Chitangai zvinyoronyoro mozowedzera simba mese muchihwa kunaka kwazvo.
Jairazve iwe kukwira murume kuti zviite nani pakuti unopindwa zvakadii zvikuri kana murume wako ane chombo chikuru. Kana usinganyorovi unofanira kuenda kuvarapi undovaudza, kana kuenda ku CHEMIST wondotenda inohi KY Jelly woizora pachombo chomurume woisawo imwe mukati mako musati papindana.
Kana uchigwadziwa wakanyorova unofanira kukasira kundotariswa urapwe nokuti pane chakaipa mukati mako.
40 Kana mukadzi achirutsa nekuchaya chii? Pane zviviri zvinodiwa kufungigwa.
1 Chokutanga anokwanisa kunge ane mimba. Endai munotesitwa mima kuCHEMIST.
2 Chechipiri ane Food Poisoning, endai kwa DOCTOR andorapwa nokukasira.
Pane zvimwe zvinokwanisa kurutsisa asi kana izvi zviviri zvashaikwa varapi vanobva vakuudzai kuti chaicho chii.
41 Pamwe ndichida kuisa mukadzi wangu, anoti aneHeadache. Tingaita sei pakadai? Ku 95% yevanhukadzi kunatsorhojewa zvinogutsa kunopedza kugwadza kwemusoro. Kune avo vasara kunoitisa musoro ugwadze. Zvobva nokuti mukadzi wako ari mugurupu ripi. Asi kana achigarohwa musoro uye iya inohi MIGIRENI, zvinokwanisa kumubatsira chose kuti agaroita ORGASM. Kuita ORGASM pakurhojana nomurume zvinonetsa, nokuti varume havadi kusvitsa vakadzi vavo panonaka apa. Zvinoda murume anotora nguva refu achikoirana nomukadzi achinonoka kudiridzira urume.
Saka iwe chibatsirana nomukadzi wako kuti moita sei nokuhwa musoro kwake. Unokwanisa kumukwizirira bhinzi kana kuisveta kuti akasire kuita ORGASm. Unozosara wopinza chombo wonakigwavo iye apedza kare. Zvese zvakangonaka.
42 Murume wangu anokomburena kuti anotadza kuwana kabhinzi kangu nokuti kadikidiki. Zvinoita here kuti kakuriswe? Pane zvandingaita here kuti kawedzere kukura? Inyaya inonetsa kuigadzirisa iyi asi bhinzi haingazishaikwi zvachose. Kuva diki ndiko hako asi kunakigwa kweanehombe neanediki kwakangofanana. Kuti murume ade yakati kurei kungotsvakawo hake chokutama nacho. Chiripo kungomubhenengurira matinji anatse kuona ikako kabhinzi kadiki kana kamira kanofanira kuonekwa.
Kana akagarotamba nako anojaira kuona kuti kari papi zvokuti haazokashayi kana oda kukapurudzira. Mochijairazve kutama musina kupfeka marambhi akatungidzwa muchiongororana.
43 Mai Chibwe, Ini hangu zvokufongora ndizvo chete chete zvandinoda. Pane vamwe vanongodawo maitire amwe chete here? Unmwe noumwe munhu ane maitire aanonyanyofarira asi zviri nani kupota uchiboitawo zvemwe nokuti umwe wako anodawo zvimwe. Kungoita maitire amwechetewo zuva nezuva bodo veduwee. Pota uchipakurirawo murume zvakasiyanasiyana. Kana iwewo unozoona kuti pane dzimwe zvimbo dzisingasviki chombo kana uchingoita zvokufongora asi ukambochinjawo unohwa kuti pamwe pasvikwa. Nyaya yokufongora inodiwa nevakawanda iri ngari tokuti unobvumidza kunatsopindwa zvinonatsohwikwa kuti haa pano ndiri kupindhwa zvizere.
Asi pota uchibvunzawo murue kuti nhasi anodei kana akuudza wombomuitirawo zvake zvisinei nezvaunoda iwe.
44 Pane chandingaita here kuti murume ade bonde. tinoita kaviri kana katatu pavhiki yese mufunge. Ini ndenge ndichida asi iye hapana zvaanoita. Nyaya yenyu pane matangire ayakaita imi musina hanya nokuigadzirisa kusvika iko zvino mese majaira kungonyarara pazviri asi musina mufaro. Mutemo wemumba ndewekuti kana pane zviri kukudya moyo taurirawo umwe wako ahwisise kuti uri kufunganya. Muviri wemunhu unojaira kuti munoita kangani paviki wonomirira izvozvo. Izvi zvinoreva kuti mese munokwanisa kudzidza kugamuchira zvinoda imwe. Iwe unokwanisa kujaira kaviri pavhiki iyewo anokwanisa kuwedzera mosvika pakati wandei.
Vanhu vakasiyana siyana pamaitire avo. Vamwe vanosvika kaviri kana katatu pazuva. Vamwe kamwe chete pamwedzi. Hapana chakaipa kana muchiwirirana pazviri. Nyaya inonetsa ndeyokusiyana sezvamakaita izvo kuti umwe anoda umwe haadi. Verenga pakahi
"kusiyana pakuda rhoji mumba."
Ini handitarise ma pikicha have done that in my early 20s ndikaguta.
Dambidziko rangu mai Chibwe nderekuti changamire vakamuka vanotamba muswere wese nehusiku havanete.
Missus vanogara vakaguta zvekuti tinorara mudzimba dzakasiyana- diff bedrooms- kuitira kuti vagoyenda kubasa kwayedza.
Zvinozonetsa ndezvekuti kana vakamuka ndirikubasa ndinotadza kunyatsosenza zvakanaka...kushandisa ruwoko hazvindibatsire , it gets worse instantly-vanobva vashatirwa zvakanyanya. Ndopaita seyi apa Mai Chibwe ?
Ndinotenda nerubatsiro in advance
Hapana chakaipa pakuvatirana usiku hwese kana muchizvikwanisa. Hakuna munhu akamboenda kuchipatara achiti avatwa nomurume usiku hwese akaita mhoni kuchitubu. Ngatisaudzana nhema. Hakuna mukadzi anofinhwa nokuiswa, hakuna.
Kuvata nomurume wako kunonaka uye kunofadza moyo. Chikuru ndechokuti murume amirire kusvika mukadzi anyorova kuti agopinza zvinotsvedzerera. Pakukkoirana munotaurirana kuti zviri kufamba sei. Kuisana makangonyarara hazviiti. Kutaura nokuchemererana zvinowedzera kunaka. Kana ukaziva kuti umwe wako ari kunakigwa nezvamuri kuitana iwewo unohwa kunaka kuchiwedzera.
Munhukadzi kana ane murume anofarira zvokungovatana nguva dzese, hazvitori nguva kuti muviri wakewo ujairire kugaroiswa zvokuti napo napo anotozoti akashaya otokomburena pazviri. Mukadzi ane murume mumba, vese nomurume wake vakawedzera kuisana sezvamunoita imi, uchaona kuti zvigwere zvomuviri zvinoita zvishoma nokuti kuisa na kunoderedza zvigwere.
Uchaonazve kuti kupopotedzana kunoita kushoma nokuti kuisana kunoita hana igare yakagadzikana. Hapana anoitira umwe hasha.
Kuisana kunowedzera rudo pakati penyu zvokuti mese munogarofungana chinova chinhu chakanaka.
Nyaya yokuti chombo chinongomuka pese pese inobva mufungwa. Munhu wese kumira kwechombo kana kuzvimirira kwekuzasi nokunyorova, zvinobva mufungwa saka zama kufunga nezvebasa kana uri kubasa wofunga nezvokuisana kana wave muzhira yokumba. Hapanazve chakaipa pakushandisa maoko. Tese tinoshandisa maoko pane dzimwe nguva. Kana zemo rikabata murume asipo, kana chombo chikamira mukadzi asipo kana kuti ari kumwedzi. Ngatisasvodeswa nenyaya dzokuisana mudzimba dzedu. Chinhu chakanaka chose kugaroisana.
46 Munhu ungaende kumwedzi here. uchangobata nhumbu Hazviiti kuti uende kumwedzi une mimba. Zvinotoreva kuti mimba yabva. Mimba dzakawandisa dzinobva pasi pemavhiki matanhatu (6) saka pamwe inobva iwe muridzi usati watoziva kuti une mimba.
Koitazve kuti mazuvano unokwanisa itwa TEST woonekwa kuti une mimba asi mwedzi wozopera usina mimba. Ingari yokuti maTEST avo ava kugona kuona mimba pasina kupera nguva waibata. Sokuti vhiki imwe chete.
47 Ko munhu anonhuwa choya angaite sei kuti asanhuwa? Choya, hapwa, vhudzi, pasi pemazamu makuru, zvese zvinokwanisa kunhuwa chose asi muridzi achitogeza kana kaviri pazuva. Munhuhwi wacho unoitiswa nemaBACTERIA asinei nokusageza. Asi paBacteria acho anokwanisa kufa zvese nomunhuhwi kana munhu akadai akageza ne Vinegar.
Tanga nokunyika chitawero chidiki wonyorovesa panzvimbo idzi chaizvo nevinegar. Womboisiya yakadaro kusvika yaoma. Woita nguva kuda awa. Wozobva wonogeza nemvura nezipo. Wodaro kaviri pavhiki imwe chete. Munhuhwi wese unopera asi iwe muridzi hauzvizivi kuti wapera nokuti hauzivi kuti wange uripo. Vanhu hatikwanisi kuzvinhuwidza.
48 Kuwetera pamubhedha
Ndave mnhu mukuru. ndinamakore 26 asi ndichiri kuwetera pamubhedha usiku ndivete. Ndazama zvese zvirokwanisika asi ndinongoweta chete kana ndivete ndozomuka ndatoweta. Izvi zvinoita kuti nditye kudanana nomukomana saka handina kumboitawo mkomana. KwaDhokotera ndaenda ndaendazve asi hapana rubatsiro. Ndoitawo sei veduwee. Ndiatsireiwo. Iyi inyaya inotyisa chose uye inoda kuti ukasire kubatsigwa pairi. Kasira kuenda kwa Doctor undomutsanangurira nyaya iyi asi iye achakwanisa kukuti undoona ve Counselling. Iri ngari yokuti chikonzero chinokwanisa kunge chichibva pamakurire awakaita kubva uri mwanana. pane chakaitika chiri mufungwa yako chiri kukukonzera kuvata zvokuti haumuki kuenda kundoweta.
Pakuona kwangu inyaya inogadzirika uye unofanira kuigadzira nokukasira. Zvadaro usashandisa nyay iyi kusada kuva nemukomana nokuti ukadaro unowedzera nyaya dzako dzisina kuti tasa. Zviri nani ugadzirise nyaya iyi kuti pasaita dzimwe muupenyu hwako.
Muviri wemunhu unosvika pane chinhanho chokuti unofanira kutanga kudanana noumwe munhu. Zvadaro unofanira kuva nerudo mumoyo mako kusvika pakuda nokudiwa nokuzojaidza muviri kuvata nomurume. Chinhu chinofadza muupenyu kupa muviri wako kumurume iyewo achikupa wake kuti munakigwe nazvo. KUpinzwa chombo nomurume anokuda zvinofadza chose.
Kuzoita mhuri yenyuwo chinhu chikuru muupenyu uye zvinofadza. Asi kuti upinde pakudanana noumwe munhu usina kugadzirisa nyaya iyi zvingakushungurudza. Handifungi kuti inyaya inonetsa zvokuti ungaita mwedzi mitatu isina kupera.
49 Ndine murume wandinoda chose chose uye anoita zvese zvandinoda asi haagoni pakundikwira. Hapana chandinonzwa pazviri. Ndava nemakore 6 taroorana. Gore ra 2014 ndakanyengwa noumwewo mukomana ndikangodawo kunzwa kuti varume vakasiyana here. Ndakavata naye kaviri ndikanakirwa zvisingaite. Ndodii nokuti murume wangu haatombogoni zvachose asi kuhura handidi. Iwe ndiwe usingagoni kutaridza murume zvaunoda kuti akuitire. Kuvatana ndekwevaviri kwete kwemurume chete kana mukadzi chete. Mese mofanira kudzidzisana zvamunofarira kuita kana kuitigwa.
Ngatisafarira kutsvaka zvikonzero zvisina musoro zvokutsvaka mahurire. Kana uchida kuhura, haushayi chikonzero asi chokwadi ndechokuti wega unohwisisa kuti kuhurira murume wako chinhu chakaipa uye kuti iye akatanga kukuhurira uchashungurudzwa nazvo.
Tanga nokufunga kuti chii chinoitika nechikomba chaunowana chichinaka. Zvadaro chizama kuchiita nomurume wako kusvika masvika paunoona kuti zvave kunaka. Tichida kuongorora chokwadi tinoona kuti kunakigwa nokuisana kunotangira mufungwa kozotevera mumuviri. Iwe kana usinganakigwi nomurume wako zvoreva kuti pane zviri mufungwa mako zvisingawirirani nokunakigwa.
Taura naye kuti unoda kumbozama zvimwe zvamusati mamboita uye kuti iye ambofungawo kuti chii chamusina kumoita chaanodawo kumbozama. Ndinowanzokurudzira kuti mudzimba vanhu vapote vachisiyanisa maitire uye zviitwa. Pamwe munombosiyawo zvokungopinzana momboita zvimwe, sokuti iye ambokusveta bhinzi kana kuti iwe kumusveta chombo, kana kumikwiza chomo nemazamu kana une mazamu makuru. Unokwanisazve kumutambisa chombo nemaoko kusvika abuda urume. Zviitwa zvakawanda zvinoita mukasire kuziva zvinokunakirai mese uye zvinokuitai muwedzere kudanana nokushamwaridzana. Kunaka kwemurume kunouya kwega pamafungire aunoita kana une zemo unaye.
50 Zvinoita here kuti chombo chomurume chiwedzere kukura. Murume wangu ane chombo chirefu asi pamwe ndofunga kuti dai chakawedzera kukora. Chombo chomurume chinowedzra kukura zvishomanana pakushandiswa kwacho uye nezera remurume. Zvinohi chinenge chakakura pekupedzisira pamakore ekuma 35-50. Iwe mukadzi ndiwe unokwanisa kuwedzera kufama kweropa muchombo chomurume wako zvichibva nokuti unomumisa chombo nguva yakadii pazuva rimwe nerimwe.
Kuvanhu vaya vanomboita nguva vachitama vasina kupfeka mukadzi achibatabata chombo chomurume wake, ropa rinowedzera kuva muchombo chonatsomira. Unokwanisazve kuchipurudzira nokuchirezva chimire kwenguva uku muchikisana henyu kana kuti murumewo achipinza mimwe yake mukati mako.
Unokwanisazve kumboita nguva uchimusveta chombo. Zvinohi hakuna murume murume asinganakigwi nokusvetwa chombo. iyezve akazvijairira watova panyaya. Asi zvinoita kuti ropa riwande muchombo chobva chanatsomira saka tsinga dzitandira chombo choita sechakakora. Nenguva chinokorera zvishoma kana muchiwanza nguva yokumira kwacho. Saka zviri kwauri.
Posted by Mai E Chibwe at 09:45
Zviito zvevabereki pakukura kwevana
Kana uchida musikana/mukomana vabereki vasingamudi...
Mirira kusvika taroorana